Teendhooyin Huddinge laga dhistay oo la doonayo in la burburiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Björn Lindberg/ Sveriges Radio
Teendhooyin Huddinge laga dhistay oo la doonayo in la burburiyo
La daabacay måndag 17 februari 2014 kl 14.58
Maanta ayey ahaan lahyd markii la go’aansaday in dadka tuugsada oo teendhooyinka ka dhistay xaafadda Högdalen laga saaro halkaas, laakiin cidina halkaas kuma sugna hadda. Dadkii teendhooyinkaas Högdalen ku noolaa oo tiradoodu gaareysey boqol qof waxaa basas loogu qaaday dalka Roomaaniya kadib markii ay iyagu sidaas doorteen..
Balse lixdameeyo ama ilaa siddeetameeyo qof oo ah dadka tuugsada ayaa u wareegey xeryo teendhooyin ah oo ay ka sameysteen meel ku taal degmada Huddinge. Halkaasna looma oggolaan doono in ay sii degganaadaan.
Dhawr maalmood gudahood ayaa buulal looga dhistay waddada Tellusvägen oo ku taal agagaarka xaafad ay ka dhisan yihiin guryo badan oo fiilooyin ah. Xero kale oo buulal ka sameysan ayaa iyadana laga ag qotomiyey agagaarka aqalka boliiska ee xaafadda Flemingsberg.
In dhisidda xeradaasi dhaqso u hirgasho waxaa suurtageliyey taageero laga helay dad tabaruc ah. Balse Bienvenido Flores, oo ah wakiilka dadka tuugsada ula xiriirta hay’adaha iyo goobaha daryeelka caafimaadka ayaa dhaleeceyn u soo jeedisey hawlaha dadkaas tabaruca ah:
- Taasi xal ma keeneyso. Degmada Huddinge horay ayey u caarisey dad degmada teendhooyin ka dhistay. Sidaas awgeed, waxa ay wadaan ma ahan xal wax ku ool ah. Arrintaan waxaa lagu xallin karaa wadaxaajood la la galo hay’adaha ay khuseyso.
Anna Silver oo iyadu ahayd qofkii keenay talada lagu caawinayo dadka soogalootiga oo ka yimid dalalka Midowga Yurub ayaa sidaan ka tiri:
- Siyaasiintu waxay aad uga hadlaan helitaanka xal waqti dheer, waana mid loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in gacan la siiyo dalka Roomaaniya sidii uu dhaqaale ahaan lugihiisa isugu taagi lahaa oo uu u yarayn lahaa cadaadiska lagu hayo dadyow dalkaask u nool. Balse waxaa kaloo loo baahan yahay in lagu xisaabtamo waxqabadka waqtiga dhow, iyo wixii dadkaas lagu caawini lahaa inta Iswiidhen ku sugan yihiin, oo aan ka ahayn in buulashooda laga burburiyo oo bannaanka la dhigo. Xal ma noqoneyso inaan marna ka hadalno in ay dadkaasi ku nool yihiin hab bani-aadanimada ka baxsan, marna aan ku oggolaanno in ay waddooyinka ku noolaadaan ama aan u goynno tigidho ay dib ugu noqdaan noloshii silica ahayd oo ay markii horeba ka yimaadeen.